Otú nyefee ozi ederede site na iOS 6 ka iOS 7
> Resource> iOS> otú nyefee ozi ederede site na iOS 6 ka iOS 7/8/9
Azụta ọhụrụ iPhone na-agba ọsọ iOS 7? Dị nnọọ nweta nkwalite otu nke gị iPhones ka iOS 7? Ị nwere ike chọrọ nyefee ozi ederede site ochie iPhone na iOS 6 na ya. Iji mee ka ọ dị mfe, ị nwere ike na-atụgharị nke Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac maka enyemaka. Ọ bụ ihe ezigbo iPhone SMS transfer ngwá ọrụ iji nyere ị nyefee niile ozi ederede site na iPhone na iOS 6 ọzọ na-agba ọsọ iOS 7 n'ime 1 Pịa. Ọzọ ihe, ọ na-enye gị ike nyefee music, listi ọkpụkpọ, foto, videos na kọntaktị, gụnyere ndị na iCloud, Exchange, Hotmail, Yahoo na ndị ọzọ na akaụntụ.
Nyefee iPhone ozi ederede site na iOS 6 ka iOS 7
Download iPhone SMS transfer ngwá ọrụ nyefee ozi ederede site na iOS 6 ka iOS 7.
Cheta na: Ugbu a, Wondershare MobileTrans akwado iPhones na-agba ọsọ iOS9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 6 na iOS 5.
Nzọụkwụ 1. Wụnye MobileTrans ngwá ọrụ na-agba ya na kọmputa
Wụnye MobileTrans ngwá ọrụ na kọmputa. Na-agba ọsọ ya na pịa na ekwentị ekwentị Nyefee ịbanye ekwentị transfer window.
Cheta na: Iji jiri MobileTrans ngwá ọrụ ime iOS SMS transfer, ị kwesịrị ị wụnye iTunes na kọmputa mbụ. Ma, MobileTrans ngwá ọrụ ga-echetara gị wụnye ya mgbe mbụ ị na-agba ya.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị abụọ iPhones na kọmputa na USB cables
Jiri abụọ USB Gịnị jikọọ abụọ iPhones na kọmputa. Mgbe MobileTrans ngwá ọrụ okụt gị iPhones jikọọ, ọ ga-wụnye ọkwọ ụgbọala na ha, ma mgbe ahụ, na-egosi ha na isi window.
Dị ka e gosiri na foto n'okpuru, n'etiti abụọ iPhones bụ tụgharịa bọtịnụ. Ị nwere ike pịa ya mgbe ị chọrọ nyefee SMS si iOS 7 ka iOS 6. Ke adianade do, Doro Anya data tupu oyiri taabụ na ala nri akuku na-eji na-enyere gị efu nke ozi igbe dị na ebe ekwentị. N'ihi ya, ego ya ma ọ bụrụ na ị na-dị nnọọ aga nanị ịzọpụta ozi site na iPhone na-agba ọsọ iOS 6.
Nzọụkwụ 3. Nyefee SMS si iOS 6 ka iOS 7
Ọ bụrụ na ị dị adịghị chọrọ nyefee faịlụ ma e wezụga SMS, ị kwesịrị ị na uncheck ndị ọzọ faịlụ. Pịa-acha anụnụ anụnụ Malite Copy bọtịnụ. Mgbe ahụ, na-eche sekọnd ruo mgbe SMS transfer na dechara. Na, na, pịa OK bọtịnụ.
Ọ na-mere! The SMS, gụnyere otu n'anya, bụ na iPhone na-agba ọsọ iOS 7. Olee otú adaba na mfe ọ bụ! Ugbu a, dị nnọọ ibudata Wonershare MobileTrans ngwá ọrụ idetuo odide ndị e si iOS 6 ka iOS 7/8/9.